Preston Manor - Ku Taageerida Ilmahaaga Waxbarshada OnlinekaItem Title
Ku Taageerida Ilmahaaga Waxbarshada OnlinekaItem Title»
Ku Taageerida Ilmahaaga Waxbarshada OnlinekaItem Title
Preston Manor School, waxaan hiigsaneynaa inaan kobcino jaceylka waxbarashada oo waxaan rabnaa inaan hubino inay sidan sii socoto xitaa markii iskuulka xiran yahay.
Waxaan ku faraxsanahay iskuulkeena guud, waxaana higsaneynaa inaan tan uga dhigno sida ugu macquulsan ee qorshaheena waxbarasho onlineka. Waxaan aqoonsan nahay in tikniyoolajiyaddu ay leedahay door muhiim ah, laakiin waxaan fahamsanahay in qof walba uusan marin u lahayn internetka ama laptop ama kombiyuutar u gaar ah had iyo jeer. Waxaan la hadalney meesha la yirahdo ‘student body’, waxaan kusoo bandhigi doonaa sidookale casharada ayagoo waraaqo ku qoran.
Meel ay suurtagal tahay, ardayda waxaa laga codsanayaa inay raacaan jadwalkooda caadiga ah oo ay ku helaan howlahooda waxbarasho ee fog fog (onlineka) iyagoo u maraya Go4Schools. Iyaga oo raacaya jadwalkooda caadiga ah waxay siinayaan qaab dhismeedka maalinta, waxayna gacan ka geysaneysaa in la hubiyo in xitaa waqti badan ay u go'an tahay maado kasta sida ay ahaan laheyd haddii ardayda ay joogi lahaayeen iskuulka. Macallimiintu waxay soo bandhigi doonaan dhammaan nashaadaadka waxbarashada maalinta 9.00am maalinta casharka. Qaar baa laga heli karaa ka hor arrintan. Fadlan xasuusi cunugaaga inuu galo Go4Schools subax walba si uu u arko nashaadaadkooda waxbarasho ee fog ee maalinta. Macallimiinta badankood waxay u isticmaali doonaan Fasalka Google sidii madal si ay u bixiyaan ilo tayo leh oo waxbarasho iyo jawaab celin joogto ah. Waa muhiim in ilmahaagu hubiyo cinwaanka e-mailka ee Preston Manor maalin kasta oo uu aqbalo 'koodhyada' fasallada 'si ay ugu galaan Google Classroom. Macallimiinta cunuggaaga ayaa la socon doona shaqada ay soo saarayaan, wayna kula soo xiriiri doonaan haddii shaqada aan la dhameystirin ama aan loo dhammeyn heerka saxda ah ee loo cayimay waqtiyada loo qabtay.
Waxaan aqoonsan nahay inay ardaydu siyaabo kala duwan uga jawaabi doonaan nidaamkan shaqo ee cusub. Qaar badan ayaa u qaadan doona si habsami leh tanina waxay fursad u tahay iyaga inay sii wadaan horumarinta awoodahooda si ay si madax-bannaan ula shaqeeyaan. Si kastaba ha noqotee, kuwa ku adkaata shaqo madax-bannaan inay ku adkaato waxay u heli doonaan tartankan waxayna u baahan doonaan taageero dheeri ah. Waxaan rabnaa inaan u xaqiijinno ardayda iyo waalidiinta in shaqaaluhu si dhow u shaqeyn doonaan ayna diyaar u yihiin inay ku bixiyaan taageeradaas halka looga baahan yahay. Waxaan leenahay rajo sare, laakiin waxaan sidoo kale xaqiiq ku nahay caqabadaha xaaladdan soo bandhigi doona.
Fadlan xusuusnow, in barashada khadka tooska ah ee internetku ay isbedel weyn ku tahay shaqaalaha iskuulka iyo sidoo kale ardayda. Waxaan ula qabsan doonnaa sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan, waxaanan si adag uga shaqeyn doonnaa sidii aan u hubin laheyn inaan sii wadno bixinta dhammaan ardayda oo dhan waxbarasho aad u wanaagsan oo xusuus mudan.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaadka manhajka ilmahaagu si caadi ah u raacaan iskuulka, oo ay la socdaan xiriiriyeyaal waxtar u leh taageerada.
Tusmooyinka waalidiinta iyo ardayda
Subax kasta: Hubi Go4schools iyo cinwaanka iimaylkaaga Preston Manor. Hubso inaad aqbashay mid 'koodka fasalka' ah si aad u gasho Fasallada Google Classrooms.
Samee jadwalka joogtada ah iyo waxyaabaha laga filayo: waqtiyada bilowga, biririfta iyo qadada iskuulka waa waqti go’an. Joogtaynta nidaamkan wuxuu gacan ka geysan karaa in la helo anshax shaqo oo wanaagsan. Ka fogow inaad maalinta ku isticmaasho dharka guri ku jooga ah!
Sameyso meel banaan oo muuqaal ah oo aad ku shaqeyn karto: tan ayaa kuu fududayn doonta inaad diiradda saarto barashadaada, iyada oo aan wax carqalad ah kaaga imaanayn.
Ka hadal qorshaha maalinta, iyo casharrada ka horreeya: inaad waqti dheer ku shaqeyso guriga waa dhul aan la aqoon. Ka hadlida sida ay wax u socdaan waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga wixii dhibaatooyin ah.
U deji wakhtiyo aad ku tegi karto ama ku safri kartid khadka tooska ah: Waqti dheeri ah ayey jiri doonaan inta aad guriga ka shaqeyso. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad la wadaagto aaladaha xubnaha qoyska, iyo dejinta xaddidaadaha waqti sii horumarsan ayaa kaa caawin kara maaraynta tan si guul leh Si la mid ah, waqti ku qaadashada khadka tooska ah waa muhiim si loo ilaaliyo isku dheelitirka maalinta.
Xusuusnow inaad jimicsi sameysid: samaqabkaaga waxaa lagu kobciyaa firfircoonaanta jirka, marka waqti u samee tan. Kooxda PE waxay qorsheyn doonaan waxqabadyo aad u wanaagsan. Tani runtii way ku caawin kartaa haddii aad dareento walwal, taas oo ah wax iska caadi ah marka aad ka shaqeyso guriga.
Akhri buug: ka bax meesha, is deji, deganaan, halka aad kobcineyso ereyadaada iyo xirfadaha aqrinta.
Ilaalinta Khataraha Ilmaha
Haddii aad raadineyso macluumaad aad ku ilaalineyso cunuggaaga ammaan iyo wanaag fadlan eeg xiriirrada hoose.
Websaydhka dugsigayagu wuxuu leeyahay ilo badan iyo xiriiriyeyaal kaa caawin kara: Caawinta Preston Manor.
Waxaad kala xiriiri kartaa waxyaabaha soo socda adiga oo ka welwel qaba
Khadka Tooska ah: https://www.childline.org.uk/ ama 0800 1111
Iridda hore ee 'Brent Family Front Door': https://www.brent.gov.uk/services-for-residents/children-and-family-support/child-protection-and-care/child-protection/contact-our-protection-team / ama 020 8937 4300
Dareenka dhalinyarada: https://youngminds.org.uk/ ama wac khadka caawinta ee waalidiinta 0808 802 5544
Fadlan xusuusnow inaad wacdid 999 haddii uu qof khatar degdeg ah ku jiro.
Ardaydu waxay ku qaadan doonaan khadka internetka waqti dheer inta lagu gudajiray mudadan barashada fog. Markaa waa muhiim in aan ardayda xasuusinno muhiimadda ay leedahay in naftooda la ilaaliyo khadka tooska ah. Xiriirka soo socdaa waa talooyinka lala wadaago ardayda Sida loo ilaaliyo Nafsaddaada khadka On-Line inta lagu gudajiro Corona Virus.
Fadlan kala hadal carruurtaada e-badbaadada. Xiriirka soo socdaa waa soo koobitaan hagitaan ah oo lagu taageerayo waalidiinta sidii ay ilmahooda ugu hayn lahaayeen badbaado intii suurogal ah.
Macluumaad dheeri ah iyo taageero ayaa laga helayaa websaydhka dugsigayaga https://www.preston-manor.com/page/?title=Online+Safety+%28E%2DSafety%29&pid=185
Fadlan la soco waxaan leenahay batoonka “CEOP” oo ku yaal bogga degelka ee websaydhka dugsiga si loogu wargeliyo booliiska isla markiiba booliiska.
Aaway shaqadii ilmahaygu?
Dhammaan nashaadaadyada waxbarashadu waxay ku xidhnaan doonaan Go4Schools ama halkaa ayaa laga qori doonaa. Cunugaagu waa inuu galayaa Go4schools subax walba si uu u arko waxqabadkooda waxbarasho maalinnimada. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku jiri doonaan fasalka Google, maadaama tani ay taageerto howlo fara badan.
Ilmahaygu ma gali karo Go4Schools. Maxaan sameeyaa?
Ilmahaagu wuxuu dib u soo celin karaa lambarka sirta ah ee uu leeyahay Go4schools-ka isagoo gujinaya 'illowsiinaya erayga'.
Goorma ayaa waxqabadyada waxbarasho ee ilmahaygu heli doonaan?
Dhammaan macallimiintu waxay higsan doonaan inay yeeshaan nashaadaad casharro ah oo loo diro Go4schools-yada oo diyaar u ah ardayda 9.00 subaxnimo maalin kasta. Waxaan ka codsaneynaa ardayda inay raacaan jadwalkooda caadiga ah ee maalinta, ku dhawaad ​​55 daqiiqo howlaha cashar kasta. Hawlaha qaarkood ayaa la heli karaa ka hor intaan, taas fadlan fadlan hubi in ilmahaagu dhammaystirayo waxqabadka saxda ah.
Haddii ilmahaagu ku jiro Sannadka 7-9 waxaa ku yaal buug-yaraha manhajka, oo loogu talagalay waalidka kaas oo kuu sheegaya waxa mawduucyada la baray iyo goorta, iyo sidoo kale ilaha waxtarka leh ee khadka tooska ah ee aad ubadkaaga ula adeegsan karto sidii aad u taageeri lahayd waxbarashadooda.
Halkee ayuu ilmahaygu ku dhammeyn karaa waxqabadka barashada?
Tani waxay ku kala duwanaan doontaa maado kasta iyo hawl kasta. Tilmaamaha waxay ku jiri doonaan nashaadaadka casharka. Hadeysan hubin, waa iney isticmaalaan buugaaga jimicsiga ama dhameystiraan shaqada.
Waan ogahay in nashaadaadyo barasho badan ay kujiraan fasalka Google. Una muuqan maayo inaan sameeyo shaqadaas.
Isku day inaad dejiso biraawsarkaaga internetka Google Google. Tani waxay ku siin kartaa waxqabad weyn.
Ilmahaygu ma fahmin waxa la sameeyo. Sidee bay caawimaad u heli karaan?
Macallimiintu waxay u shaqeyn doonaan meel fog isla markaana cunuggaaga wuxuu u diraa emailka macallinkooda. Macallimiintu waxay ku dadaali doonaan inay ka jawaabaan su'aalaha sida ugu dhakhsaha badan ee ay kari karaan. Haddii ilmahaagu ku sii wadi karo dhinac kale oo waxbarashadiisa ah tani waxay siineysaa macallinka waqti uu kaga jawaabo su'aalahooda. Hadday bartaan shan cashar maalinti oo 30 arday ah fasal kasta, macallimiintu way isdhaafsan karaan 150 arday oo kaladuwan maalintii, oo midkastaaba uu weydiin karo wax kabadan hal su’aal. Tan macnaheedu waxay noqon doontaa in jawaab-celintu aysan ahayn isla markiiba ama ballanqaad. Su'aalaha toos looma jawaabi karo laakiin waxaa looga hadli karaa casharka kan xiga.
Qorshahan fog ee waxbarashadu ma khuseysaa ardayda ku jira foomka VI?
Haa, gabi ahaanba. Waxaan rabnaa inaan hubinno in dhammaan bartayaasha ay sii wadaan inay si adag u shaqeeyaan oo ay u helaan waxqabadkooda waxbarasho maalin kasta.
Sideen ula xiriiraa qof haddii aan su'aalo qabo?
Fadlan xusuusnow in barashada khadka tooska ahi ay isbedel weyn ku tahay macallimiinta iyo sidoo kale ardayda. Dhammaanteen waan la qabsan doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah, laakiin markaan helno su'aalo badan oo aan helno, waxay qaadaneysaa waqti dheer si looga jawaabo. Haddii weydiimahaagu ay lama huraan tahay, fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto. Haddii aysan degdeg ahayn oo ay sugi karto illaa aan dib u furno, tan ayaa xitaa ka sii fiicnaan lahayd.
Hadaad qabtid su'aal guud oo ah 'year group', fadlan emayl u dir qofka qaabilsan waxbarasho sanadkeedkiisa:
Haddii ay tahay baaritaan degdeg ah oo ka duwan, fadlan cinwaanka u dir info@preston-manor.com
Fadlan isticmaal hal cinwaan oo xiriir ah markiiba. U diritaanka farriinta cinwaanno dhowr ah hal mar waxay u egtahay inay gaabineyso jawaabteena halkii aan si dhakhso ah u dardargelin lahayn.
Ilmahaygu badanaa wuxuu arkaa lataliyaha iskuulka. Maxaa dhacaya hadda?
Haddii ilmahaagu arko mid ka mid ah la-taliyayaasha, waxaa kula soo xiriiri doona la-Taliyaha iskuulkooda haddii ay suurtagal tahay taleefan ama emayl. Halkii ay suuragal tahay, la-taliyaha dugsiga ee arrinta khuseeya ayaa horey uga wada hadlay xiriirka la oggolaaday ee cunuggaaga.
Sidee taageerada SEN u shaqeyn doontaa hadda?
Shaqaalaha 'SEN' waxay xiriir joogto ah la yeelan doonaan dhammaan ardaydeenna leh EHCPs - ha ahaato taleefan ama emayl. LSA-yadayadu waa xubno ka tirsan fasalada google ee loogu talagalay casharada halkaas oo ay inta badan ku taageerayaan. Iyaga oo la kaashanaya macalinka maadada cunuggaaga, waxay la xiriiri doonaan ardayda muhiimka ah, iyagoo hubinaya in shaqadu ay tahay mid la heli karo oo ay ku siin karaan talo ama shaqo dheeri ah oo ay ugu baahan karaan kor u qaadis.
Meesha ay dhalinyarada ku lug leeyihiin waxqabadyada SEN, sida Manhajka Shakhsiyeed ama Taageerada Daraasadda tusaale ahaan, waxaan haysannaa fasallo Google loogu talagalay ardayda oo lagu diyaariyo virtual hub. Intaa waxaa sii dheer, ardayda u baahan taageero dheeri ah xagga qorista, xisaabta iyo / ama xirfadaha kale ee muhiimka u ah guusha, shaqaalaha SEN waxay hubin doonaan ardayda inay marin u helaan shaqo ku habboon oo ay ku dhammaystiri karaan si madax bannaan, jawaab celin shaqsiyeed, si joogto ah.
Ilmahaygu wuxuu xaq u leeyahay Cunnooyinka Iskuulka ee Bilaash ah. Ma caawin kartaa?
Haa. Waxaan ka sugeynaa faahfaahin dheeraad ah dowladda. Sida ugu dhakhsaha badan oo aan wax badan ogaano waan la xiriiri doonnaa.
Ilmahaygu wuxuu xaq u leeyahay buugga taakuleynta VI-ga. Maxaa dhacaya hadda?
Waxay heli doonaan wax soo iibsigooda sidii caadiga ahayd, iyagoo siinaya inay si adag uga shaqeynayaan waxbarashadooda fog.
Ilmahaygu ma ku soo laaban karaa dugsiga si uu u soo qaato buugaag inta aan xidhan nahay?
Xilligan la joogo. Iskuulada ayaa loo xiray si loogu abuuro 'jeedinta bulshada' si loo ilaaliyo qof walba. Hadday taasi wax iska beddelaan, waanu kula soo socodsiin doonnaa.
Goormaad dib u furi doontaa?
Waxaan si joogto ah ula xiriirnaa Maamulka Deegaanka iyo saraakiisha Caafimaadka. Waxaan wadaagi doonnaa qorshooyinka dib-u-furitaanka websaydhka maadaama talo laga helo. Waxaan aad u rajeyneynaa in qof walbaa nala soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan. Cusbooneysiinta ku saabsan Covid-19 waxaa laga heli karaa halkan https://www.gov.uk/goxty/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
Waxaan dib u eegi doonnaa xaaladda 15-ka Abriil, si aan go'aan uga gaarno sida ay ardaydu ugu sii wadan doonaan waxbarashadooda markii muddadu ay bilaabato 20-ka Abriil.
Ajutor oferit copilului pentru a învăța de acasă
مساعدة طفلك بالتعلم عن بعد
રિમોટ લર્નિંગ દ્વારા તમારા બાળકને ટેકો આપવો